HAMBALYO! Heerka "Duuliyaha Gudaha ee Hanuuninta Cadaadiska Yaraynta Cadaadiska" heerka oo ay hogaaminaysay shirkadeena waxaa ogolaaday Ururka Tayada Badeecada Zhejiang oo ah "Qiyaasta Tayada" ee kooxaha wax soosaarka zhejiang ...
Sidee ayuu solonoid waalka u shaqeeyaa?
Waa maxay solenoid? Solenoid waa ereyga guud ee siligga siligga loo isticmaalo elektromagnet. Waxay sidoo kale loola jeedaa qalab kasta oo u rogaya tamarta korantada tamarta farsamada iyadoo la isticmaalayo qalabka loo yaqaan 'solenoid'. Qalabku wuxuu ka abuuraa birlab-mareenka korantada wuxuuna adeegsadaa birlabta birlabta si loo abuuro linea ...
2020, waanu wada gudubnaa
Waqtigu wuu duulayaa, isla markiiba, sanad badhkii sanadka 2020 ayaa dhaafay. Shirkadaha iyo shaqaalaha xitaa adduunka oo dhan ayaa maray tijaabo cusub lixdii bilood ee la soo dhaafay sababo la xiriira COVID-19. Bilowga sanadka 2020, oo ay saamaysay xaalada faafa, bilowga shirkada d ...